जेलमा अपराधीभन्दा बढी सोझासाझा तथा सर्वसाधारण हुन्छन् - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
जेलमा अपराधीभन्दा बढी सोझासाझा तथा सर्वसाधारण हुन्छन्
बन्दीहरूको नालीबेली पढ्न पाइयो (फ्रन्टपेज : जेलको अलग संसार) । कतिपयले सिर्जनशील तथा सीपमूलक काम पनि गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई सुध्रिने, राम्रो काम गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । जेलबाट निस्किएपछि समाजले पनि उनीहरूलाई आम मानिसजस्तै स–सम्मान बाँच्न सक्ने वातावरण दिनुपर्छ ।
एकदमै मार्मिक लेख (समय सन्दर्भ : दामलाई माया गर्ने पुस्ता) । कामलाई माया गर्नेहरू दत्तचित्त भएर काममै ध्यान दिन्छन् । पैसा मात्र खोज्नेले जे पनि गर्छन् । स्वदेशमै श्रम गर्ने चुनौती सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य कमैमा मात्र फेलापर्छ ।
निश्चय नै सुमित खड्काजीले भनेको कुरा सही हो (जेलभित्रका सांगीतिक कार्यक्रमले ट्रिटमेन्टको काम गर्छ) । जेलभित्र बस्नेहरूका लागि सांगीतिक कार्यक्रमहरूले केही मात्रामा भए पनि ट्रिटमेन्टको काम गर्छ । संगीले तनाव तथा रिस घटाउन सघाउँछ । योग एवं मेडिटेसनका कार्यक्रमहरू आयोजित गर्न सके अझ राम्रो हुन्छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सार्वजनिक गरेका नयाँ डिजाइनका अन्डरगार्मेन्ट आकर्षक छन् (पहिलो विश्व : रोनाल्डोको नयाँ अन्डरवेयर) गर्मीका लागि यस्तै पहिरन उपयुक्त हुन्छन् ।
फेसबुक फन्डा सधैं रमाइलो छ ।
ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छाड्नु हुँदैन (अपराध : भर्चुअल ठगीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह) । भर्चुअल ठगीमा संलग्नहरूका लागि सरकारले बेग्लै कानुन तयार पार्नुपर्छ ।
जेलमा अपराधीभन्दा बढी सोझासाझा तथा सर्वसाधारण हुन्छन् (अन्तर्वार्ता : जेल परेका सबै अपराधी हँुदैनन्) जसको कुनै पहुँच हँुदैन । निर्दोषहरू अन्यायमा परेर तथा शक्तिशाली व्यक्तिको सिकार भएर जेलमा बस्न बाध्य हुन्छन् ।
यो गलत परिपाटी हो (गजुरियल विश्लेषण : भारतविरुद्ध नेपाल बन्द) । नेपाल बन्द गरेर यस्तो समस्या समाधान हुँदैन ।
यस्ता पनि जेल हुँदा रहेछन् (संसारका प्रसिद्ध जेल) † नेपालका जेलमा बन्दीहरू कोचाकोच गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो मुलुकले विकसित देशबाट कहिले पाठ सिक्ला ?
साप्ताहिकबिनाको शुक्रबार र नुनबिनाको तरकारी उस्तै लाग्छ मलाई ।
मनोरञ्जक समाचार एकै ठाउँमा पढ्न पाइन्छ, त्यसैले साप्ताहिक राम्रो लाग्छ । रंगमञ्चका समाचारलाई अलिक बढी ठाउँ दिए हामी रंगकर्मीहरू पनि हर्षित हुने थियौं ।
साप्ताहिकमा पठनीय सामग्रीहरू प्रकाशित गरियोस् । बेलाबेला सामान्य विषयमा समेत बहस गरिएको देखिन्छ ।
हो, यसकारण म अरूको स्थान र रफ्तार हेर्दै कहिल्यै अलमलिइनँ (युवा मन : आफैलाई चिन्नु) । म आफूलाई प्रेम गर्छु । मेरो अधिकांश समय म आफ्नै लागि हुन्छ । म एकान्तमा आफ्नै गुण र दोषको समीक्षा गर्छु । मलाई आफ्नै रफ्तारसँग मतलब छ ।
बन्धनमा परेपछि माया शिथिल हुन्छ (यात्रा सन्दर्भ : कथा रोनी र रूपसीको) । सम्बन्धहरू बन्धनमा बाँधिएपछि खुम्चिन थाल्छन् । रोनी र रूपसीको कथा रमाइलो छ ।
स्वार्थ मिलुन्जेल सबै ठीक, नमिल्दा लफडा श्रावण २०, २०७५
नर्कमा सजाय कम गराउन मिल्छ कि नाइँ ? श्रावण २०, २०७५
नेपालमा चेक बाउन्सको ठूलै समस्या छ श्रावण १३, २०७५
हिजोसम्म ‘खराब’ शेरबहादुर तामाङ आज नैतिकवान् भए श्रावण १२, २०७५